Dizaayinara Itoophiyaa uffannaa abbootii seeraa Keenyaa geeddarteen walbaraa - BBC News Afaan Oromoo
Dizaayinara Itoophiyaa uffannaa abbootii seeraa Keenyaa geeddarteen walbaraa
Goodayyaa suuraa Kokab ammas badhaasaaf dizaayinaroota afriikaa shan waliin dorgomti
Abbootiin seeraa Keenyaa keessattuu filannoo biyyaalessaatiin booda qalbii namoota hedduu hawwataniiru.
Uffata dambii abbootii seeraa kanneen duuba lammiin Itoophiyaa tokko jirti. Isheenis dizaayinar Kokab Zamad jedhamti.
Haalli uffannaa abbootii seeraa kanneenis bara 2013 yeroo jalqabaatiif haala uffannaa warra Ingilizii dhiisuun kan Keenyaatti kan geeddarame dizaayinii lammiin Itoophiyaa taate Kokab hojatteeni.
Uffannaa kana irrattis magariifni Heera biyya Keenyaa kan bakka bu'u yoo ta'u, geengoon bifa warqii itti marfame ammoo, gamoo mana murtichaa kan agarsiisuudha.
Hojiin kunis hojiiwwan hanga ammaatti Kokab hojatte keessaa kan caalaa itti gammadduu dha. Uffatichi ji'oota muraasa dura geeddaramu illeen, kan jalqabaa ta'usaatiin muziyamii mana murtichaa keessatti agarsiifameera.
Goodayyaa suuraa Uffannaan abbootii seeraa mana murtii olaanaa Keenyaa waggoota afuriif tajaajilee jira
Wayita dubbisuuf gara mana ishee deemneetti, Kokab kan nu simatte uffata Itoophiyaa waggoota 60 dura akkawoon ishee uffataa turan irratti kaabbaa dhiheenya kana hojattee uffachuun ture.
Faashinii fi aadaan adda bahuu hin danda'an. Siriiyyu wal cimsu malee kan jettuu haatii qabeenyaa 'Kokii Dizaayin' Kokab Zamad, faashiniin garaa garummaa aadaa waggoota 60 attamiin akka walitti araarsee uffannaa isheetiin mirkannesitee jirti.
Kokab erga Keenyaa jiraachu eegalte waggoota 17 dabarsitu illeen, meeshaalee fi uffannaan aadaa manaa fi bakka itti hojattutti argaman Itoophiyaan ala ta'ushee nama dagachiisu.
Dhaabbata ishee Kokii Dizaayiiniitiin bara 2009 irraa eegaluun uffannaa Itoophiyaa fi kan biyyoota afrikaa biraa walitti maktee hojachuu isheetiin Naayiroobii keessatti fudhatama argachaa jirti.
''Huccuu keenya irratti hundaa'uun wandaboo fi kootii namaa hojjadha. Akkasuma uffannaa guyyaa hunda uffatamu irratti ammoo kuula isaa qofa itti makuun huccuu biraa waliin wal simsiisa. Sababiin isaas wal makuu waan natti fakkaachaa tureef dura kana hin barbaaduun ture. Amma garuu yoon itti yaaduu, kuula xiqqoo itti ida'uun aadaa keenya beeksisuun badaa hin ta'u mitii,? jechuu dubbatti.
Image copyright koki designs
Goodayyaa suuraa Kuula huccuu aaadaa uffannaa biroo waliin waliin makuun maatiif kan hojjetame
Kokab maamiltoonni ishee irra caalaan lammiilee Keenyaati. ''Isaaanis uffataa fi kuula Itoophiyaa baayyee jaalatu,'' jetti.
Kokab hojiiwwan ishee kanneenii fi kan mana murtii olaanaatiin alattis, uffatawwan aadaa fi ammayyaa'oo lammiileen afiriikaa kan biraa jaalatanis ni dhiyeessiti.
Kana malees, dizaayinoota uffannaa dubartootaa, dhiirootaa fi ijoollee akkasumas uffata bakka hojii fi tibba ayyaanaatti uffataman adda addaa hojechuun agarsiisawwan gara garaarratti ni agarsiifti; gaabaafis ni dhiyeesitti.
Ammas badhaasa dizaayinii Afriikaa bahaa kan bara 2017tiif kaadhimamtuu ta'uun filatamtee jirti.
''Amma huccuuwwan Keenyaatti argamanitti fayyadamuun dizaayinoota adda addaa hojjadheera. Kan Itoophiyaa ammoo isaan biyyatti hojatamanan dizaayina haaraatiin hojjadha.
Kana malees, bara 2009 irraa kaasee industirii keessatti dorgomtuu ta'uun turuun kiyya kaadhimummaa kiyyaaf waan daandii naa saaqee natti fakaata,'' jeetti Kokab. Dorgommiin kunis gara gabaa addunyaatti of makuudhaaf haala kan mijeessuuf ta'usaas dubbatee jirti.
Kaayyoon badhaasichaa inni guddaan dizaayinaroota ilaalcha haarawaa mataa isaaniitti fayyadamuun industirii kanaaf gumaacha olaanaa taasisaniif kabaja keennuuf ta'u marsaritii qopheessitootaa irraa hubachuun danda'ameera.
Ulaagaaleen ittiin gamaggamanis, waan haaraa uumuu, haala gaariidhaan dizaayina xumuru, ilaalcha dhuunfaa fi dhimmoonni biraa illen ni ilalamu.
Kokabis badhaasa kanaaf dorgomtoota biyya Keenyaa, Ruwaandaa fi Taanzaniyaa irraa dhufan shan waliin dorgomti.
Goodayyaa suuraa Bara 2017 tti agarsiisawwan torba irratti hirmaatee jirti.
Sirni badhaasaa dorgommichaas sagalee faarsitootaan marsariitii irratti kennamuu fi abbootii seeraa waliin Fuulbaana 27 raawwatama.
Haa ta'u malee oggeettii dizaayinaa tanaaf waggoota saddeettan darban keessa waanni hundumtuu hin qajeelleef ture. Keessattu jalaqaba irratti taateewwan baay'een ittiin baradheera jettu raawwattee jirti.
''Uffanni jalaqaba hojadhee amma illeen jira. Huccuu rakasaatiin hojjadhee yaaluun qaba ture. Ani garuu waanan kan hin hubanneef huccuu qaalii ta'een hojadheen nama narraa bitu dhabe. Achinis kisaaraa kiyya yaa ta'u jechuunan callise.''
Haati ishee wayita ijoollee turtetti kan waa'ee jirbii fo'uu fi uffata tolchuu kan barsiifteen. Isheenis uffata aadaa uffachuu fi ijoollee ofiitiif hodhu jaallatti.
Haa ta'u malee, kunis akka bashannanaatti malee akka hojiitti yaaduuf waggoota dheeraa itti fudhatee jira.
''Osoon jalqabumaan ofitti amanamummaa fi oggummaa isaa sirriitti qabaadhe turee, duran dizaayinara ta'a ture. Beekumsa waanan hinqabaanneef dhimmoonni jalqaba eenyutu narraa bitaa? Eenyuufanis hojjadha?'' jedhan baayyee na yaachisu ture.
Kana malees Kokab biyya Keenyaa fi damee hojichaatiif haarawaa waan turteef haalawwan jiran hubachuuf yeroo itti fudhatee ture.
Adeemsa kan salphiseef simannaa Keenyaanotaa fi feedhii isaan waan haarawaa yaaluuf agarsiisan akka ta'elleen ni dubbatti.
Kanaan kaka'umsa argachuunis, Kokab dhaabbata 'Kokii Dizaayin' hundeessuun baatii sadi keessatti agarsiisa faashinii ishee kan jalqabaa dhiyeessite.
Kokab akka jettuutis, fiixaan bahiinsa waggoota saddeettan darbaniitiif jalqabbiin isaanii yaada ta'u isaa dubbatti.
''Yeroo baayyee yoo yaadni naaf dhufu halkan nan ka'a. Yaadni haarawaan naaf dhufee hangan ganama raawwadhuutti qalbiin koo hin tasgabbaa'u. Dafee ka'een dizaayina isaa kaafadha.''
Goodayyaa suuraa "Fakkiin dizaayina yeroo hunda hojii koo naaf salphisa"
Kokab yeroo hunda hojiiwwan ishe kan yaaltu ofuma ishee irratti. Sababiin isaas mira inni maamiltoota kiyya irratti qabaatu sirriittan ittiin hubadha kan jeedhu dha.
"Yaadni ka'umsaa kiyya maal akka fakkaatu miira dhugaan ittiin argadha. Ashangulliitiiwwan lubbu hinqabnes bareedina malee gocha hin agarsiisan.''
Kokab dhaabbata Kokii Dizaayiin waggoota shaniin booda caalaa kan cimee fi hojii walitti fufiinsa qabu qabatee dhaabbata faashinii gabaa addunyaa gahu gochuuf karoorfattee jirti.
Karoora ishee kana galmaan gahuufis badhaasa Afriikaa Bahaa bara 2017 kana abdatti.